Huawei dia manolotra an'i Kirin 980, mpikirakira matanjaka indrindra | Androidsis
Kirin 980: ofisialy izao ny processeur matanjaka indrindra an'i Huawei
Voamarina herinandro lasa izay ary androany dia lasa zava-misy. Kirin 980, processeur avo lenta vaovao an'ny Huawei, dia natolotra tao amin'ny IFA 2018. Ny marika sinoa dia nametraka ny tenany ho iray amin'ireo zava-baovao indrindra amin'ny fanamboarana processeur. Zavatra mitranga indray amin'ity maodely ity, ny voalohany eto an-tany novokarina tamina dingana 7 nm.
Kirin 980 dia aseho ho mpanodinana tsara indrindra amin'ny marika Mandrak'izao. Huawei dia mamela antsika amina processeur matanjaka, miaraka amina fisian-tsolosaina artifisialy ary mitady hijoro amin'ireo processeur Snapdragon.
Raha fintinina, Huawei dia mampiseho indray ny asa lehibe ataon'izy ireo amin'ity lafiny ity. Avelany miaraka amina processeur matanjaka be isika, izay tsy isalasalana fa manampy ny fahombiazan'ny findainy. Misy lafiny lehibe maromaro ho an'ity mpikambana vaovao ao amin'ny fianakaviana Kirin ity. Lazainay anao bebe kokoa etsy ambany.
2 Vita amin'ny 7nm sy ny hery
3 Rahoviana i Kirin 980 no ho tonga?
Araka ny efa nampoizina, Ny faharanitan-tsaina artifisialy dia mitana andraikitra lehibe amin'ny Kirin 980. Ny marika sinoa dia nametraka an'ity haitao ity ho iray amin'ireo hevi-dehibe amin'ity fikirakirana ity. Izy dia manana ny anjara asan'ny fampiraisana ireo singa mifandraika rehetra, ary manome ihany koa ny famantarana ny drafitry ny mpanamboatra sinoa amin'ny ho avy.
Ny processeur tamin'ny taon-dasa dia nampiditra NPU (Neural Processor Unit) miaraka amin'ny computing cloud, ary tamin'ity taona ity dia te-handroso lavitra kokoa izy ireo. Satria i Huawei dia manolotra Dual NPU amin'ity tranga ity. Misaotra an'io fa mihombo ny hafainganam-pandehan'ity mpikirakira ity.
Raha ny marina, ny hafainganana dia iray amin'ireo tanjak'ity modely ity. Araka ny nambaran'ny marika manokana, ity processeur vaovao ity dia hahafantatra zavatra indroa haingana kokoa noho Snapdragon 845 ary inefatra hafainganam-pandeha A11 avy amin'i Apple. Mazava fa tsy manana fialonana firy amin'ny fifaninanana amin'io lafiny io izy ireo.
Vita amin'ny 7nm sy ny hery
Miatrika processeur vaovao amin'ny lafiny rehetra izahay. Araka ny Kirin 980 no processeur voalohany mampiasa teknolojia 7nm. Efa hatry ny ela no niresaka an'ity teknolojia ity, saingy tsy vao izao no tonga ilay maodely voalohany namboarina tao. Ka io Huawei io no mahavoa voalohany amin'ity tranga ity.
Ny fahombiazan'ny herinaratra sy angovo dia lafiny roa hafa mampamirapiratra ity mpanodina ity. Ny CPU dia voaforon'ny Cortex -A76 cores, izay miaraka amina GPU-tsary Mali-G96. Ankoatr'izay, manana modem Cat 21 ao koa izahay. Huawei dia te-ho processeur matanjaka, mahomby ary manan-tsaina izay manamora ny fifandraisana. Ny fanamboarana fototra simenitra dia:
Cores Cortex-A2 76 misy hafainganam-pandeha hatramin'ny 2.6 GHz
Cores Cortex-A2 76 misy hafainganam-pandeha hatramin'ny 1.92 GHz
Cores Cortex-A4 55 misy hafainganam-pandeha hatramin'ny 1.8 GHz
Ny orinasa koa dia nanolotra angon-drakitra momba ny fahombiazana sy ny fahombiazan'ny Kirin 980. Misaotra azy ireo izahay manana hevitra mazava momba ny zavatra andrasana. Voalaza fa hisy izany 75% matanjaka kokoa noho Kirin 970 ary 58% mahomby kokoa noho ny teo alohany. Dingana avo lenta amin'ny kalitao, araka ny hitanao.
Ny fampidirana a mpikirakira sary vaovao. Misaotra an'io, ny antsipiriany avo indrindra azo atao dia ho azo avotana amin'ny karazana toe-javatra rehetra. Na dia amin'ny tarehin-jiro sarotra aza, toy ny sary amin'ny alina.
Rahoviana i Kirin 980 no ho tonga?
Tao anatin'izay herinandro lasa izay dia naseho fa ny tetikasan'i Huawei dia ny hampiseho an'ity processeur vaovao ity alohan'ny hidirany amin'ireo tsena finday avo lenta. Ny telefaona voalohany mampiasa Kirin 980 dia ny Mate 20 sy Mate 20 Pro. Ireo finday roa ireo dia havoaka amin'ny fararan'ity taona ity
Raha ny marina dia efa voamarina fa hisy izany hetsika tamin'ny 16 Oktobra tao an-tanànan'i Londres mba hanolorana ireo telefaona roa ireo avo lenta. Ary izy roa dia hatanjaka amin'ny processeur tsara indrindra novokarin'ny marika sinoa hatreto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Kirin 980: ofisialy izao ny processeur matanjaka indrindra an'i Huawei
Alcatel 3T 8: Ny takelaka Android Go voalohany eny an-tsena